Iindawo ekuchithelwa kuzo iisandals ekuchitheni iiholide ngoku ziBhiyozela iMbasa yeGalufa eBalaseleyo kunye ne-Spa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Iindawo ekuchithelwa kuzo iisandals ekuchitheni iiholide ngoku ziBhiyozela iMbasa yeGalufa eBalaseleyo kunye ne-Spa
Awards • Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zeGrenada Breaking • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Resorts • Sports • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iindawo ekuchithelwa kuzo iimbadada zokuchithela iiholide ziBhiyozela iiMbasa zeGalufa kunye ne-Spa
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zeSandals inembeko ngokubhengeza ezona ziwonga lwayo lwamva nje kwiiMbasa zeHlabathi ze-Spa zesi-6 zoNyaka kunye neMbasa yesi-8 yeHlabathi yeGalufa.
Zombini ezi nkqubo ziyinxalenye yeeMbasa zokuHamba zeHlabathi kwaye zibhiyozela kwaye zivuze ukugqwesa kwezokhenketho.
ISanals Emerald Bay Golf Course, ikhosi enemingxuma eli-18, kwicala lolwandle ithatha iiyadi ezingama-7,001 inika iimbono ezibukekayo ezingenakuthelekiswa nanto kwaye yeyona khosi inde kwiCaribbean.
Iimbadada iRed Lane Spa yaseGrenada iqhayisa ngonyango olufakwe izithako zendalo kwindawo yayo yetropikhi.
I-Sanals Grenada's Red Lane Spa iye yabizwa ngokuba yeyona ndawo iBalaseleyo ekuchithelwa kuyo iiholide yaseGrenada kwaye iKhosi yeGalufa ye-Emerald Bay iye yawongwa njengesona Sikhosi seGalufa sase-Bahama. Zombini iinkqubo ziyinxalenye ebanzi IiMbali zoRhwebo zeHlabathi kwaye sisebenzele ukubhiyozela kunye nokuwonga ukugqwesa kwezokhenketho ngelixa sijolise ekukhuthazeni imigangatho ekhethekileyo.
Ikhuthazwe bubuhle bendalo obungasemva beCaribbean, iSandals Grenada's Red Lane Spa izidla ngonyango olufakwe izithako zendalo kwindawo yayo yetropikhi kunye nesetingi ezinoxolo ezinje ngeetafile zokuthanjiswa ezisecaleni kwe-bungalow ezisecaleni elwandle ukuze ufumane amava okuzola kunye nokuhlaziya. Ukusuka kwi-Raindrops Dreams massage edibanisa amandla e-aromatherapy kunyango lwe-Night Blooming Jasmine eyilelwe ukomeleza ubudlelwane phakathi kwakho kunye nomntu okhethekileyo, izibini zinokuziva zihlaziyekile kwaye zihlaziyekile emva konyango lwazo.
Iyilwe ngunozakuzaku weGalufa weGlobal wenkampani ekuchithelwa kuyo iiholide, uGreg Norman Iimbadada ze-Emerald Bay Golf Course, imingxuma eli-18, ikhosi kwicala lolwandle ithatha iiyadi ezingama-7,001 inika iimbono ezibukekayo ezingenakuthelekiswa nanto kwaye yeyona khosi inde kwiCaribbean. Uhlaza lwanamhlanje luye lwaziwa ngee-fairways ezinomdla ngelixa imimoya yorhwebo yesiqithi se-tropical peninsula ithembisa abadlali amava awodwa ngomjikelo ngamnye.
Ukubhukisha indawo yokuhlala kwaye ufunde ngakumbi ngezi ndawo zokuchithela iiholide ziphumelele amabhaso tyelela iimbadada.com. Ukufumana ulwazi oluthe kratya ngeeMbasa zeGalufa zeHlabathi kunye neeMbasa zeHlabathi zeSpa, ndwendwela worldgolfawards.com/about kwaye worldgolfawards.com.
Zili-16 iiNdawo zokuchithela iiNdawo zoBunewunewu eziBandakanyiweyo ezifumaneka kulo lonke elaseCaribbean kuquka iJamaica, iBahamas, iGrenada, iBarbados, iAntigua, iSaint Lucia neCuraçao. Nganye ibonelela ngesetingi ezimangalisayo eziphambi kolwandle, iindawo zokulala ezitofotofo kunye nezinto ezininzi ezenza amava eSanals Luxury Included®. Yathiywa igama lophawu lweHotele yeCaribbean kwiBhaso lokuHamba leHlabathi iminyaka eli-18 ilandelelana, iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiholide ngumgangatho owaziwayo weeholide zothando zaselwandle, ezinomdla wokuphumelela imbasa yegalufa kunye nemisebenzi ye-spa.